UPRINCESS EUGENIE UYA KUPHULA ISITHETHE SASEBUKHOSINI KUNYE NEKHEKHE LAKHE LOMTSHATO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UPrincess Eugenie uya kuphula isithethe sasebukhosini kunye nekhekhe lakhe lomtshato
I-CHICHESTER, ENGLAND-JULY 30: IPrincess Eugenie kunye noJack Brooksbank (L) bazimasa umhla wesithathu woMnyhadala waseQatar waseGoodwood eRoodwood Racecourse ngoJulayi 30, 2015 eChichester, eNgilane. (Ifoto nguTristan Fewings / imifanekiso ka-Getty kwiQatar yeGoodwood Festival)
Ngu: Esther Lee 10/08/2018 kwi-11: 55 AM
Ngumtshato wale mihla. NjengoMeghan Markle kunye neNkosana uHarry, kungekudala umtshakazi uPrincess Eugenie uza kuyishiya iBritane yasebukhosini isiko lokukhonza ikhekhe leziqhamo ezomisiweyo ngokuthanda iprofayili yala maxesha emtshatweni wakhe noJack Brooksbank ngolwesiHlanu, Okthobha 12.
IBuckingham Palace ibhengeze kule mpelaveki ukuba u-Eugenie uzakupheka velvet ebomvu kunye nekhekheyitha eyenziwe ngumyili wekhekhe osekwe eLondon uSophie Cabot. Uyilo lwe-confection luyakhuthazwa yimibala etyebileyo yasekwindla! Ibhotwe longezwa, [Iya kugqitywa ngomsebenzi oswekile oneenkcukacha kubandakanya ivy.
UCabot ngumyili wempahla owayesakuba ngumyili weeqebengwana ze-bespoke.
Iingoma ezilungileyo zomtshato zokuhamba ezantsi
Esi sibini sicele umyili wekhekhe osekwe eLondon uSophie Cabot ukuba enze ikhekhe labo lomtshato. U-Miss Cabot, ofunyenwe sisibini nge TheDukeOfYork @iqosweb , Iya kuyila velvet ebomvu kunye nekhekhe yetshokholethi, ephefumlelwe yimibala ecebileyo yasekwindla! #Ukutshata okuthembekileyo pic.twitter.com/tADL8KJ0cS
-Usapho lwasebukhosini (@RoyalFamily) Okthobha 6, 2018
I-Duke kunye neDuchess yaseSussex uHarry kunye noMeghan bakhethe ukuyeka isithethe ngokunikezela ngokudibanisa umlomo ikhekhe lekhekhe le-lemon eligalelwe ngebhotolo kunye nokuhonjiswa kweentyatyambo ezintsha. Ikhekhe labo lenzelwe umpheki waseMelika ozelwe eLondon uClaire Ptak we-Violet Cakes.
Iziqhamo ikeyiki eyenzelwe emitshatweni sele isisithethe kusapho ngenxa yokwenziwa kweswiti ngokwayo, ekwaziyo ukuhlala intle iinyanga. Ukukhethwa kwekhekhe kubangelwa ngumtshato kaPrincess Victoria kwaye wadluliselwa kumtshato kaKumkanikazi uElizabeth kunye nePrince Philips, kunye nomtshato kaPrince William noKate Middleton ka-2011.
Kunye neenkcukacha zekhekhe, ibhotwe laveza ukuba iindwendwe ziya kothuka ngumdlali weqonga ngexesha lomsitho ngokwawo. UTenor Andrea Bocelli uya kubabaza abazimasa ngeziqwenga zakhe ngexesha lomsitho wangoLwesihlanu obubanjelwe eSt. George's Chapel eWindsor castle.
indlela yokumiselwa e-illinois
izipho ezivela kumyeni ukuya kumtshakazi
isitokhwe esigciniweyo somfazi 2016
Izimvo zodonga niche zokuhombisa
Ngaba ukhona umhla wokugqibela wokutshintsha kwegama emva komtshato
Ubungakanani beminyango yekhabethe